नवप्रवेशीलाई एकदमै उपयोगी ३ दिने आधारभूत सेयर तालिम सम्पन्न हुँदै ! यस्तो छ अन्य विवरण !
ARCHIVE, SHARE MARKET » नवप्रवेशीलाई एकदमै उपयोगी ३ दिने आधारभूत सेयर तालिम सम्पन्न हुँदै ! यस्तो छ अन्य विवरण !
काठमाडौँ- ज्ञानेश्वरमा वैशाख ७ गते शुक्रबारबाट तीन दिने सामान्य तथा आधारभूत शेयर तालिम सन्चालन हुँदै छ । तालिम नवप्रवेशीलाई लक्षित गरी तयार गरिएको हो । तालिममा शेयर बजारको परिचय, शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने कुराहरु , कम्पनीको वित्तिय अवस्थाको सामान्य जानकारी , शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोगको बारेमा जानकारी दिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
'यो प्रकृतिको तालिम दिदै आएको हाम्रो यो आठौ व्याच हो , आज सम्म सबैको राम्रो माया र समर्थन पाएका छौ' नेशनल मर्चेन्टका सन्तोष राज बजगाईले जानकारी दिनु भयो । तलिम बेलुका ४ बजे देखी ६ बजे सम्म सन्चालन हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । तालिम शुल्क भनेर १ हजार निर्धारण गरिएको र महिला तथा विधार्थीलाई २० प्रतिशत छुटको व्यावस्था गरिएको आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
तालिममा सहभागी हुन ९८४९०५६१६१ मा सिधै संपर्क गर्न सकिने छ , अथवा तलको लिन्कमा गएर नाम टिपाउन सकिने छ ।
कार्यक्रम स्थान : नेशनल बैंकर लिमिटेड , ज्ञानेश्वोर (जर्म्नन दुतावसको अगाडी) राजधानी मात्र होइन देशका विभिन्न ठाउमा शेयर तालिम दिदै आएको र यो कार्यक्रमलाई अझै देश भर विस्तार गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।
Tags : ARCHIVE, SHARE MARKET